Taona vaovao : santarin’i Onja amin’ny « Ampela modely » | NewsMada
Taona vaovao : santarin’i Onja amin’ny « Ampela modely »
Mitohy hatrany ny asa famoronana ! Taorian’ny « Olo premier plan » nankafizin’ny olona maro tamin’ny taon-dasa, namoaka ny sanganasany vaovao nampitondraina ny lohateny « Ampela modely » i Onja Tinondia. Tsy mivaona amin’ny gadona nahafantarana azy hatramin’izay. Fampivadiana ny gadona avy any atsimon’ny Nosy amin’ny zavamaneno sy ny gadona maoderina.
Rakitsary na « clip » vaovao « Ampela modely », maneho fa tsara sy kanto ny vehivavy malagasy. Manana ny maha izy azy eo amin’ny fahaiza-mitondra tena. Mendrika sy fitaratra ho an’ny fianakaviana sy ny firenena.
Ho an’ity mpanakanto ity, tamin’ny ankapobeny, tsara ny nandiavany ny taona 2016. Tontosa ny fitetezam-paritra maromaro teto Madagasikara. Ho an’ity taona 2017 ity kosa, amin’ny volana marsa izao ny fanombohan’ny fitetezam-paritra manerana ny Nosy. Ho maro kokoa ireo faritra tsy mbola nolalovany no hanatanterahany fampisehoana.
Fantatra ihany koa fa hisy ny fitetezam-paritra any ivelan’i Madagasikara amin’ity taona ity.